Cilmiga Hogaaminaya |
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee ka timid LEDinside, qayb ka mid ah shirkadda cilmi baarista suuqa ee TrendForce, 2018 Global LED Digital Display iyo Micro LED Display Market Outlook, sababo dhaqaale xumo awgeed, suuqyada caalamiga ah ee loo yaqaan 'LEDdisplay suuqa' waxay la kulmeen koboc xaddidan iyo baahida suuqa ee muuqaalka dhaqameed ayaa hoos u dhacay ...
Dhammaan bandhigyada LED-ka ee bannaanka loo soo saaro lama wada siman. Iyada oo xulashooyin iyo astaamo aad u tiro badan la heli karo, xulashada midka ugu habboon ayaa dhib noqon kara. Qaar ka mid ah Display LED waxay soo saartaa heerar tayo sare leh halka kuwa kale ay diirada saaraan bixinta bandhigga LED-ka banaanka ee ugu fiican Keebaad dooneysaa ...
Bandhigga banaanka ayaa diiradda saaraya dayactirka, kaas oo la kulmay dabayl iyo roob. Marka waxaan u baahanahay inaan doorano sheyga ugufiican, oo hada soo badanaya soosaarayaasha soo bandhiga LED taasoo keentay tayada xun ee muujinta LED-ka oo aan ahayn nidaam ilaalin oo wanaagsan. Habka / tallaabada Macaamiil badani ma cadda t ...